HAYLOU RS3, uhlalutyo, ukusebenza kunye nexabiso | Zonke iinkonzo ze-intanethi
HAYLOU RS3, uhlalutyo, ukusebenza kunye nexabiso
URafa Rodríguez Ballesteros | 23/07/2021 20:00 | Reviews
Sibuyela kwi-Androidsis ngohlaziyo olunomdla ukuba ungomnye wabo bafuna I-smartwatch entsha kraca kweli hlobo. Ukuba ujonge ukuthatha inyathelo kwelona linxiba kakhulu ngaphandle kokushiya intywenka kumzamo, jonga kuyo yonke into ekunikezela yona IHAYLOU RS3. Sikwazile ukuvavanya iwotshi entsha yomsayino kaHAYLOU kwaye iza nokuninzi esinokukunika.
I-smartwatch kudala ikho ukuhambelana ngokufanelekileyo kwe-smartphone yakho. Izaziso, ilog yomsebenzi kunye nokunye okuninzi. Kodwa zininzi kakhulu kwaye zahlukahlukene iinketho ezikhoyo kwintengiso kangangokuba ngamanye amaxesha kunzima kakhulu ukugqiba. Namhlanje senza kube lula kuwe ngokukuxelela konke malunga neHAYLOU RS3.
1 IHAYLOU RS3, inobukrelekrele, intle kwaye iyasebenza
2 Ukungabikho kwibhokisi HAYLOU RS3
3 Inkangeleko ebonakalayo yeHAYLOU RS3
4 Iimpawu zeHAYLOU RS3
5 Itheyibhile yeempawu zeHAYLOU RS3
6 Iinkonzo kunye neengozi zeHAYLOU RS3
7 Uluvo lomhleli
IHAYLOU RS3, inobukrelekrele, intle kwaye iyasebenza
Inkangeleko yomzimba ayisiyiyo yonke into xa sithetha ngezixhobo zeteknoloji. Kodwa akukho mathandabuzo ukuba uyilo lwezi luye lwavela kakhulu kwaye namhlanje iba yingongoma esisiseko. Ngokukodwa xa sithetha ngento enxibekayo edibanisa indlela yethu yokunxiba.
Kungenxa yoko le nto i-HAYLOU RS3 ibekiwe phakathi kwee-smartwatches ezingazenzi ngathi zitsala umdla ngenxa yokubonakala kwazo. Nge a umgca olula ngaphandle kwempumelelo isenza sigxile ngakumbi kwinto enakho ukusinika yona kwinqanaba lezibonelelo. Kodwa kufanele kuqatshelwe ukuba nangona uyilo lwayo lungabonakali, isisixhobo esihle kwaye yenziwe kakuhle. Iwatchwatch obuyikhangela, Thenga i-HAYLOU RS3 ngoku elona xabiso libalaseleyo.
Ukungabikho kwibhokisi HAYLOU RS3
Sijonga ngaphakathi kwebhokisi ye-HAYLOU RS3 ukukuxelela into esinokuyifumana kuyo. Njengamaxesha onke, kwi-unboxing yewatchwatch zimbalwa (okanye akukho) isimanga esisifumanayo. Mhlawumbi ngamanye amaxesha umenzi uthatha isigqibo sokubandakanya umtya owongezelelweyo, kodwa oku akunjalo.
Si iwotshi uqobo, encinci isikhokelo sokusebenzisa engenalo ulwimi lweSpanish. Kwaye njengesiqhelo, a intambo yokutshaja enomazibuthe yebhetri yokubukela. Njengoko sisitsho, iziseko kunye nobuncinci esinokulindela.
Inkangeleko ebonakalayo yeHAYLOU RS3
Sele sichazile ukuba kwinqanaba lobuhle alitsali ingqalelo. Kwaye oku kwiimeko ezininzi kuyinto elungileyo kwinxalenye enkulu yabathengi abanokubakho. IHAYLOU RS3 ifika nayo umtya werabha mnyama, uthelekisa umzimba wewotshi, kunye 22 mm ububanzi obuqhelekileyos. Bala kunye ukuthamba okuthambileyo kwaye uziva unganyangeki. Singayitshintsha ngokulula ngenxa ye ukuvalwa kwethebhu eqhelekileyo, kwaye sineentlobo ngeentambo zemitya kunye nezixhobo kwiwebhusayithi esemthethweni yeHAYLOU.
Sijonge kuye isikrini, kule meko ye- Imilo Round. Ifomathi enabaphikisi kunye nabathandi phantse ngokulinganayo, kodwa oko kunika umfanekiso weklasikhi kunye nesitayile. Sifumene Iphaneli ye-AMOLED ye-1.2-intshi idiagonal apho Singakhetha ubungakanani bokukhanyaokanye, into esiyiphosileyo kwezinye izixhobo ezivavanyiweyo.
Cwangcisa ngoku eyakho IHAYLOU RS3 Ngesaphulelo
Ukugqiba iscreen sakho nge 2.5 D imiphetho egosogoso iyenza idityaniswe ngaphandle komthungo kunye nesakhelo sealuminium. Banikezela ngokugqwesileyo amava omsebenzisi kwaye kumnandi kakhulu ekuphathweni. Ngaphandle kokuyijonga loo nto sigqibo sifumana ntoni ku 390 x 390 iphephap ingaphezulu lee kuninzi lokhuphiswano olunikezelayo.
Kwicala lasekunene sifumana amaqhosha amabini ukuchukumisa. Nangona isikrini sikulawula ukulawula iteknoloji yokuthinta, ukuba namaqhosha omzimba kuhlala kuthandwa. Inkqubo ye- iqhosha eliphezulu isebenza njengeqhosha ikhaya. Kwaye sinokuyicinezela ukuvula nokucima isikrini. Okanye ngokucinezela ixesha elide ukuvula okanye ukucima iwotshi.
El iqhosha phantsi, kunye nescreen kuyo nayo iyenza isebenze umboniso wayo. Kodwa neyakhe Umsebenzi othe ngqo uyaqwalaselwa. Sinokukhetha nayiphi na imisebenzi okanye ulwazi oluthile ukuze lusebenze xa ucinezelwe. Imozulu, yenza umsebenzi wezemidlalo, okanye ujonge imiyalezo efunyenweyo ...
Kulo ngasemva Ingaba i isivamvo senqanaba lentliziyookanye. Sifumana ukufundwa okukhawulezayo okuchanekileyo xa kuthelekiswa neemitha ezinokuthenjwa. Kodwa kufuneka sithi ngokufunda okusebenzayo kwenqanaba lentliziyo, ukusetyenziswa kwebhetri ephezulu kakhulu kunesiqhelo kuqatshelwe. Kwakhona i Izikhonkwane zemagneti zokutshaja.
Iimpawu zeHAYLOU RS3
Njengayo nayiphi na i-smartwatch exabisa ityuwa yayo, enkosi kunxibelelwano ne-smartphone yethu, iyasinika Esihlahleni, ngalo mzuzu, ulwazi lwemiyalezo, iminxeba kunye nezaziso zeeNkqubo ezikhethiweyo. Ngale nto unayo Unxibelelwano lweBluetooth 5.0 enikezela ngamava azinzileyo ngaphandle kokuqhawuka okungahambi kakuhle. Ukuba sele uqinisekile, thenga apha IHAYLOU RS3.
Iimpawu zeHAYLOU RS3 a I-accelerometer ye-6-axis kunye Ukuchaneka okuphezulu kweGPS ezidibanayo ukubonelela ngokufunda ngokuchanekileyo kwentshukumo nganye. Siza kuba nengxelo echanekileyo yomsebenzi ngokweendawo ezihanjiweyo, indawo kunye neentshukumo, kunye neekhalori esikwazi ukuzitshisa kuloluya hlobo ngalunye. Singakhetha phakathi kwe Imisebenzi yezemidlalo eli-14 ifakwe kwangaphambili.
Sikwafumana, ukongeza kufundo oluchanekileyo lokubetha kwentliziyo yethu, ukongeza uninzi olungenalo. IHAYLOU RS3 ixhotyiswe nge isivamvo esibonakalayo esikwaziyo ukusinika ukufundwa kokugcwaliswa kwegazi kwioksijini (). Idatha ebalulekileyo, ethi yona kunye nefayile ye- Uhlalutyo olupheleleyo lwephupha lethu, Inokusinceda siphucule imeko yethu yomzimba kwaye sifunde ukuzikhathalela.
Icandelo lefayile ye- ibhetri Ikwasinika idatha elungileyo. Sifumene ibhetri nge Intlawulo ye-230 mAh ukuba i-priori ayibonakali ngathi yinto enkulu. Kodwa kufuneka sigcine engqondweni ukuba i-HAYLOU RS3 sisixhobo "esincinci". Ukongeza, enkosi ngokusebenza kakuhle kwamandla, yayo inkululeko iyandiswa phezulu ubuninzi beentsuku ezili-15.
Singatsho nge-HAYLOU RS3 ukuba kunjalo iwotshi yamanzi. Zininzi ezibonelela ngokuchasene namanzi okanye uthuli ngeziqinisekiso ezahlukeneyo ze-IP. Kule meko, akufuneki sikoyike ukufumana i-smartwatch yethu emanzini okanye emanzini. Ayilolize ukumelana ukuya kuthi ga kwi-5 ATM y singayigalela ukuya kuthi ga kwiimitha ezingama-50. Umzimba wayo wentsimbi "unibody" uyenza ilungele ukulawula nawuphi na umdlalo owenzayo, nokuba ulunxwemeni okanye echibini.
Itheyibhile yeempawu zeHAYLOU RS3
format Ukudayela okujikelezayo
Tamaño I-AMOLED eyi-intshi ezingama-1.2
Isigqibo I-390 x 390 dpi
Into evikela amanzi I-XMA ye-5
Inzwa yokubetha kwentliziyo Si
Ulawulo lokugcwalisa i-SpO2 Si
Ukuntywila 50 m
Ukuchasa I-XMA ye-5
Ibhetri Ilithium 230 mAh
Ukuzimela Ukuya kutsho kwiintsuku ezili-15
Ubukhulu X x 50.5 43.4 12.5 mm
Ixabiso 59.50 €
Ikhonkco lokuthenga IHAYLOU RS3
Iinkonzo kunye neengozi zeHAYLOU RS3
Imilinganiselo ye ukugcwala kwegazi.
Isisombululo 390 x 390 dpi
Ibhetri imfutshane kakhulu ngeGPS.
Kubonakala ithambile ngaphambi kokuwa.
Uphengululo lwe: URafa Rodríguez Ballesteros
Ithunyelwe nge: 23 de julio de 2021
Utshintsho lokugqibela: 23 de julio de 2021
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Reviews » HAYLOU RS3, uhlalutyo, ukusebenza kunye nexabiso
Olona khetho lubalaseleyo kwiAmazon
Uyenza njani iselfowuni ukuba ihambe ngokukhawuleza ngala maqhinga ali-9